Tanànan’i Toamasina: Manolo-tanana ireo orinasa tsy miankina tsy hianahan’ny coronavirus
Tonga nanolotra « masque » ho entina miaro ny tsy hiparitahan’ny valan’aretina ny banky BFV-Société Générale aty amin’ny faritra Atsinanana ; nanolotra fitaovam-pitsaboana isan-karazany ny orinasa Ambatovy ; nanolotra savony 400 baoritra ny orinasa SKT ho an’ny hopitaly be sy ny hopitaly manara-penitra, ho entina miady amin’ny fihanaky ny otrik’aretina aty amin’ny faritra Atsinanana. (Jereo Sary Tohiny)
Lutte contre le coronavirus: 100 000 masques et 20 000 kits de test pour Madagascar
100 000 masques de protection et 20 000 kits de test rapide sont désormais à la disposition de l’État Malagasy pour lutter contre la propagation du coronavirus à Madagascar. Le Président de la République Andry Rajoelina s'est rendu à la BANI Ivato dans la nuit de ce 25 Mars 2020 pour réceptionner ces nouveaux matériels médicaux. Il était accompagné de la représentante de l’Organisation Mondiale de la Santé à Madagascar, le professeur Charlotte Faty Ndiaye. Il s’agit d’un don de la Fondation du milliardaire chinois Jack Ma, afin de soutenir les pays africains à faire face à la pandémie de coronavirus.
Zokiolona manodidina ny 10 400 isa no hisitraka ity « Vatsy TSINJO » ho an'Antananarivo sy Toamasina. Nanomboka androany alarobia 25 marsa 2020 ny fizarana ireo fanampiana, izay fanampi-tsakafo toy ny vary, menaka, macaroni, sardine, sira… tamin'ireo Fokontany eto Antananarivo Renivohitra. Niara-nanatanteraka izany ny fiadidiana ny raharaha Sosialy eo anivon'ny fiadidiana ny prezidansa (DASP), ny avy eo anivon'ny Minisiteran'ny Mponina, ny Association Fitia ary ny Kaominina Antananarivo Renivohitra. (Jereo Sary Tohiny)
Nitondra fanazavana mikasika ny fanemorana ny fanefana ny faktiora volana martsa 2020 ny mpitantana ny orinasa Jirama, androany, ho fampiharana ny fanambaran’ny Filohan’ny Repoblika ny alin’ny 24 martsa 2020, mikasika ny Drafitra ara-tsosialy amin’ny hamehana. Voalaza tamin’izany fa afaka aloa in-dimy miantoana ao anatin’ny 5 volana ny faktiora izay tsy naloa rehefa miverina amin’ny laoniny ny fiainana andavanandro. Manana safidy ihany koa anefa ny mpanjifa raha hanefa avy hatrany ny faktiora tsy voaloa na ho zaraina 10 volana ny handoavana izany, izay hifampiresahina amin’ny JIRAMA. Mampahafantatra ihany koa ny Jirama fa ireo faktiora efaina tsikelikely dia hozaraina miaraka amin’ny faktioran’ny fandaniana isam-bolana. (Jereo Sary Tohiny)
Mampahafantatra sy manome toky ny mpanjifa ny OMH (Antokondraharaha malagasy momba ny akoranafo) fa ampy tsara ny tahiry ary mizotra antsakany sy andavany tsy misy fahatapahany, ny famatsiana sy ny fitsinjarana ny entana rehetra toy ny solika sy ny entona fandrehitra manerana ny Nosy. Noho ny antony ara-pandaminana, hoy ny OMH, dia ferana ho tavoahangy misy entona fandrehitra ho IRAY (01) ihany, isaky ny mpanjifa eto Antananarivo Renivohitra, na firy na firy ny lanjan’ilay tavoahangy, no vidiana mandra-piverenan’ny fitsinjarana amin’ny ara-dalàna. Mihoatra 1 500 tavoahangy no vatsiana isan’andro eny amin’ireo toeram-pivarotana maro samihafa, ireo toby famarotana lasantsy sy ireo mpaninjara hafa, ka mety hisy indraindray ny fahataran’ny fitsinjarana, hoy ny fanazavana.
Manoloana ny zava-misy ankehitriny dia nanapa-kevitra ireo mpanorona ny orinasa AKANJO et ROVA CAVIAR MADAGASCAR fa ampiasa ny fitaovana eo ampelatanany hanamboatra ary anolotra takom-bava na masque ho an'ireo mpiara-miasa aminy, ny fianakavian'izy ireo, ny manodidina ary ho an'ny mpitondra fanjakana. Izany takom-bava izany dia amboarina miainga avy amin'ireo tapa-damba, atao teviny 3, azo sasana ary azo ampiasaina matetika. Hatreto dia tsy nahazo ny fankatoavana manara-penitra iraisam-pirenena ity takom-bava ity, fa tsapan'ireo mpanorona ny orinasa AKANJO et ROVA CAVIAR MADAGASCAR anefa fa mety ilaina izany.
Ho fampiharana ny fanambaran'ny Filoham-pirenena ny 22 marsa lasa teo, ho fiadiana amin'ny valanaretina Covid-19, dia nanapa-kevitra ny Birao Mahaleotena iadiana amin'ny kolikoly na ny Bianco, fa tsy hisy fandraisana mivantana ny fitarainana sy fitorohana eo anivon'ny biraon'ny Bianco manerana ny Nosy. Mitohy kosa ny fandraisana izany amin'ny alalan'ny telefonina, mailaka, tambanjozatra internet i-toroka sy ireo tambazotra-tserasera samihafa sy ny mailaka.